कौसीखेती Archives | आफ्नैबारी
हरियो खुर्सानीको लत लागेको त छैन??
ताजा हरियो खुर्सानी ठोसेर खाना खान रुचाउनेले यो लेख ध्यान दिएर पढनुहोला। हामी बार्दलीमै हरियो खुर्सानी फलाउने तरिका बताउदै छौं। टिपेर प्लास्टिकमा पोको पारेको बासी खुर्सानी भन्दा टिप्ने बित्तिकैको ताजा खुर्सानीको स्वाद खुर्सानीको “पारखी”लाई मत्र थाहा हुन्छ। अझ खुर्सानी चाहिं […]
हामीलाई कौसीखेती सिकाईदिनु पर्यो भनेर धेरैले अनुरोध गर्नुहुन्छ। हामी उहाँहरुलाई सुरुमा धनियाँ रोप्नुहोस भन्छौं। यदि तपाईलाई पनि कौसीखेतीको शुरुवात गर्ने मन छ भने धनिया रोप्नुहोस। यदि धनियाँ उमार्न र हुर्काउन जान्नु भयो भने तपाईले धेरै कुरा फलाउन सक्नुहुन्छ। हरियो धनियाँ […]
तपाईलाई भेन्टा कत्तिको मन पर्छ? यदि मन पर्छ भने आउनुहोस कौसीमा भेन्टा फलाउने सजिलो तरिका सिकौ। पहिला कुरा गरौ किन भेन्टा फलाउने भन्ने बारे। काउली, बन्दा वा मुला जस्ता तरकारीहरु एक पटक प्रयोग गरेपछि सकिन्छ। टिप्यो खायो। तर, भेन्टा यस्तो […]
मध्य बानेश्वरमा रहेको अन्तराष्ट्रिय संमेलन केन्द्रको ठिक पछाडिका ५-७ वटा घरमा कौसीखेती गरिन्छ। ति कौसीहरुमा समय अनुसार हरियो-परियो फलिरहेको हुन्छ। कतिले त कौसीमै कुखुरा पालन पनि गरेका छन। कौसीमा तरकारीसंगै फूलबारी पनि छ। ति कौसीहरुमा मौसम अनुसार साग, खुर्सानी, धनिया, […]
August 15, 2019 August 28, 2019 0
घरका फोहोर नफाल्नुस बरु घर पछाडि अथवा कुनै बक्सामा जम्मा गर्नुस। त्यसलाई मल बनाउने सजिलो तरीका हामी बताउदै छौं। यो तरिकामा कुनै बिशेष किरा, सामान वा रसायन चाहिदैन। बरु फालिएका ति फोहोर माथि तरकारी बा फलफुल फल्दै गर्छ। गमलामा मल तयार […]